बाल्यकालको5साधारण चोटपटक र दुर्घटनाहरूको प्राथमिक उपचार (first aid Nepali 1)
नानीहरू सँधै दगुर्दै रहनछन्, विश्व अन्वेषण गर्दै, तिनीहरू दुर्घटना, चोटपटक र विषाक्तताको शिकार हुन्छन। सबै अभिभावकहरुले आफ्ना नानीहरुमा कम्तिमा पनि मामूली चोट वा जलन को अनुभव गर्छन। यो आवश्यक छ कि सबैलाई प्रभावकारी प्राथमिक चिकित्सा कौशलको राम्रो ज्ञान होस र सामान्य गल्तीहरू संग बाच्न सकोश। उनीहरूलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि कब अवस्था गम्भीर छ र अस्पताल लैजानु जरूरी छ। यो लेखको दुई भागहरू छन्, पहिलो भागले सामान्य बाल्यावस्थामा हुने चोटपटकको उपचार संग सम्बन्धित छ। दोस्रो भाग (जो अर्को लेखमा आउनेछ) बाल्यकालको आपतकालिन र विषाक्तता को प्राथमिक चिकित्सा को विषय मा हुनेछ।
प्राथमिक उपचारको लागी सधैं के गर्ने?
1. शान्त रहनुहोस् – कुनै नानी आपतकालिन अवस्थामा देखेर कोही पनि डराउँन् सक्छन, आमा-बाबु त अझै अधिक। यद्यपि रहनु प्रभावकारी प्राथमिक उपचार गर्न निम्त र चोटपटकबाट बाच्न आवश्यक छ।
3. पहिला आफूलाई सुरक्षित राखनुहोस् – यद्यपि यो स्वार्थी लाग्न सक्छ, तपाईंले प्राथमिक उपचार गर्नको निम्त यो आवश्यक छ। एक बिरामी नानीलाई अस्पताल लैजानु आफै नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ, यदि अरु एकजनालाई चोट लाग्यो भने, यो अरुहरूका लागी बोझ बन्न पुग्छ।
चोटपटकमा कहिले अस्पताल लैजाने?
अक्सर यो नानीहरूमा सहज हुन्छ, कहिलेकाँही चोटपटक पछि हुन सक्छ।
नानीलाई नाक को नरम भाग “पिंच” गराएर अलि अघि झुकाएर कुर्सीमा बसाउनुहोस् कम्तिमा 15 मिनेटसम्म।
कुकुरले टोकदा कहिले अस्पताल लैजाने?